Platzi: Waa madal rasmi ah oo wax looga barto teknolojiyadda (Khibradeyda) | Laga soo bilaabo Linux
Platzi: Madal rasmi ah oo lagu barto tiknoolajiyadda (Khibradeyda)
Luigys toro | | Featured, GNU / Linux, Barnaamijka, Lagu taliyay
Waxaan u arkaa in barashada joogtada ahi ay tahay geedi socodka ugu muhiimsan ee bina aadamka, waxaan wax ka barannaa laga bilaabo xilliga aan dhalanay ilaa aan ka dhimanno iyo waa inay ahaato waajib akhlaaqeed in la isku dayo in maalin walba wax cusub la barto. Maanta, marin u helka waxbarashada deegaan kasta waa la dimuqraadiyey, Jaamacadda, machadyada iyo akadeemiyadu waxay noqdeen habab aqoonsi, halka aqoonta ugu badan laga soo helay ilo kala duwan, inta badan si xad dhaaf ah iyo nidaam la’aan. kuwa kale qaab dhismeed, qaab iyo si wanaagsan loo aasaasay.
Waxaas oo dhami waxay keeneen abuurid tiro badan dhufto ee diiradda saaray waxbarashadaQaarkood waa bilaash, bilaash, gaar loo leeyahay, lacag la siiyay ama si fudud la isugu daray, mid walbana wuxuu leeyahay faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa, qaar badan oo ka mid ahna waxay oggol yihiin dad aad iyo aad u tiro badan in si ku filan loo tababaro si ay u gutaan ganacsi, xirfad ama ku takhasusaan aag baahi weyn loo qabo. . Anigu shakhsiyan waan kaqaybqaatay dhowr barnaamijyadan, midkastaaba wuxuu isiiyay aqoon kaladuwan, laakiin cabsi la'aan inaan khaldamo, Platzi wuxuu ahaa midka waxbadan kusoo kordhiyay noloshayda shaqo.
1 Waa maxay Platzi?
2 Sida loo barto Linux oo leh Platzi oo loo helo shahaado?
3 Sidee loo barto barnaamijka bilaashka ah ee Platzi?
4 Ogaanshaha Jinsiyadaha Platzi?
5 Ku guuleysto deeq waxbarasho bil ah Daraasadda Platzi
Waa maxay Platzi?
Platzi waa a madal waxbarasho oo internetka ah taas waxaan u arkaa mid aad u xiiso badan, wax ku ool ah oo xirfad leh, taas oo diiradda saareysa ka caawinta ardayda inay bartaan aqoon u oggolaaneysa iyaga inay gaaraan horumarin la taaban karo oo la xiriirta mushaharkooda, jagadooda shaqo ama awooddooda si ay u horumariyaan ama u abuuraan shirkado u gaar ah.
Platzi badanaa wuxuu ku wareegaa waxbarashada la xiriirta tikniyoolajiyadda laakiin daruuri kuma xirna barnaamij, maaddaama ay kooxi ka tahay shaqooyin iyo koorsooyin noo oggolaan doona inaan baranno sameynta sawir ku filan oo nafteena ah si loo abuuro hirgelinta riyadeenna, iyada oo loo marayo barashada geeddi-socodka lagama maarmaanka u ah in nolosha la siiyo fikradaheenna, laga faa'iideysto Shirkadaheena, kobcinta iyo naqshadeynta alaabadayada, suuqgeynta xalalkeena ama si fudud nooga caawiya inaan ku raaxeysano inta aan sixirka sameyneyno ama wixii si kale ah loo dhihi karo, inta aan barnaamijka sameyneyno.
Madalkani wuxuu leeyahay in kabadan 100 koorso iyo 24 shaqooyin, in ka badan 100000 oo arday oo wax ka baranaya websaydhka iyo horumarinta barnaamijka, suuqgeynta khadka tooska ah, qaabeynta isdhexgalka, serverka, iyo kuwo kale, Kuwaas oo u adeegsada barxadda agagaarka beel si firfircoon u firfircoon, oo kaabaya barashada fasallada Tooska ah iyo kuwa Duuban oo ay barayaan khubarada warshadaha.
Guusha Platzi waa shaki la'aan inay awood u leedahay inay awood u siiso ardaydeeda, iyada oo barashada loogu talagalay dhagaystayaasha oo dhan oo leh nuxur soo jiidasho leh oo waxtar leh, iyadoo la adeegsanayo habab baris fudud oo madadaalo leh, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka sii weyn hal-abuurnimo joogto ah. Sidoo kale, madal wuxuu leeyahay heerka dhameystirka koorsada sare oo dhaaftay 70%, taas oo tilmaamaysa taas Inta badan dadka ku dhiirada inay wax ku bartaan Platzi waxay dhammeeyaan koorsooyinka la soo jeediyay, wax muhiimad weyn uleh bulshada leh xulashooyin badan laakiin nasiib daro ay adagtahay in la cadeeyo ujeedooyinka.
Sida loo barto Linux oo leh Platzi oo loo helo shahaado?
Waxa ugu horeeya ee aan sameeyay markii aan bilaabay Platzi waxay ahayd inaan sameeyo Koorsada Maamulka Linux Server, taas oo ay na siinayaan sababo aad u fiican oo ah sababta aan ugu adeegsaneyno Linux on Servers, oo na baraya inaanu qabanno qaabeyn aasaasi ah oo heer sare ah, sida kala soocida bilowga ah, qaabeynta barnaamijka, kala soocida iyo maaraynta bootka, ficilada kala duwan ee sida saxda ah loogu maareeyo server , komishanka, kormeerka iyo keydinta, iyo waliba cilmiga amniga Linux oo horumarsan.
Koorsadu waxay u qaybsan tahay fiidiyowyo dhowr ah oo ay kaabayaan ilo aad u xiiso badan, wax aan si gaar ah u jeclahay, waa in casharrada oo dhan ay jiraan caqabado ay tahay inay ardaydu ka gudbaan oo u oggolaanaya xaqiijinta aqoonta ay barteen.
Dhamaadka koorsada, waxaan qaadan karnaa koorso Shahaado ah, oo damaanad qaadi doonta aqoonta la helay iyo tan leh taageerada Platzi.
Sidee loo barto barnaamijka bilaashka ah ee Platzi?
Koorsadani waxay ku bilaabaneysaa tusaalooyin fudud sida soo saarista feejignaanta biraawsarkayaga iyo sharaxaad faahfaahsan laakiin madadaalo leh oo ku saabsan sida tani u dhacdo, ka dib waxay na siineysaa booqasho ku saabsan howlaha iyo amarrada aasaasiga ah ee barnaamijyada ka dibna aan dhex galno xalliyaan lix mashruuc oo barnaamij ah oo noo oggolaan doona, iyo waxyaabo kale, si loo xisaabiyo Miisaankayaga meeraha kale (iyadoo loo eegayo xaaladaha culeyska ee mid kasta oo ka mid ah), ku dhaji Canvas oo leh fallaaraha kumbuyuutarka, u samee aasaaska ciyaarta fiidiyowga u gaarka ah, xisaabinta dhibaatooyinka guud. sida fizzbuzz-ka caanka ah, sameyso ATM ama ku raaxeyso sameynta codsi macaamiil heer sare ah.
Haddii aadan baran inaad ku barto barnaamijka Koorsada Aasaasiga ah ee Platzi, waxaan shaqsiyan kuu xaqiijinayaa inay kugu adkaan doonto inaad barato barnaamijka, runti waa mid fudud oo cad, oo leh tusaalooyin murugsan oo leh xalal fudud.
Caawinaad dheeri ah oo aan kugula talinayo waa inaad isticmaasho wadiiqooyinka wax lagu barto, mid aan soo jeediyo tusaale ahaan kuwa doonaya inay bartaan barnaamijka Linux, waa waxyaabaha soo socda:
Ogaanshaha Jinsiyadaha Platzi?
Platzi wuxuu hayaa qorshe Xirfadeed oo isugu jira koorsooyin taxane ah oo ka kala socda aagag kala duwan, adigoo ka gudbaya xirfad aan soo barannay aqoon kala duwan oo noo oggolaan doonta inaan isku tixgelinno inaan ku takhasusno aaggaas, tusaale ahaan, inaan uga gudubno xirfadda Maamulka Server iyo DevOps waa ansixiyay Hordhaca koorsooyinka terminal-ka iyo amarada, Koorsada Maamulka Linux Server, Koorsada Xirfadlaha DevOps, Koorsada Bixinta Adeegyada Websaydhka Amazon, Azure laaS Course, Azure PaaS Course, DigitalOcean Course, Deploy Course with Now.sh, Koorsada Dhismaha Codsiga ee Docker iyo koorsada cusub ee IBM Cloud Fundamentals, taas oo ah, waxaan ku yeelan doonnaa aqoon ballaaran oo isku dhafan aagga, una dhiganta kiisas badan illaa heer jaamacadeed.
Platzi wuxuu hadda bixiyaa shaqooyinka soo socda:
Degree Aasaasiga Barnaamijka
Dib-u-dhiska horumarinta ee PHP
Qaab dhismeedka hore
Kobciyaha Apple Fullstack
Horumarinta Codsiga Android
Horumarinta barnaamijka iskutallaabta
Horumarinta dib u laabo Ruby
Istaraatiijiyada Suuqgeynta iyo Dijital
Maamulka Server iyo DevOps
Horumarinta Codsiga ee ASP.NET
Xog Weyn iyo Xog Saynis
Dib u soo celinta Python
Naqshadeynta Alaabta Dijital ah iyo UX
Horumarinta dib ugu laabo GO
Wax soo saarka maqalka
Horumar ku samee falcelin
Suuqgeynta Xogta Ku saleysan
Internetka ee Waxyaabaha
Markaad dhammaystirto oo aad oggolaato shaqooyinka ama koorsooyinka Platzi waxay ku siinaysaa shahaado sidan oo kale ah:
Ku guuleysto deeq waxbarasho bil ah Daraasadda Platzi
Marka hore waxaan kuu sheegayaa in platzi ay bixiso 5 koorso oo bilaash aad u muhiim ah sida Koorsada Xirfadaha Git iyo GitHub, Koorsada Aasaasiga Aasaasiga ah, Codka Codka Suuqgeynta Casharka, Koorsada Shahaadada Shakhsi ahaaneed, iyo Koorsooyinka Aasaasiga ee Injineernimada Software.
Marka lagu daro koorsooyinka aan kor ku soo sheegnay, Platzi wuxuu bixiyaa qorshooyin waxbaris bille iyo sanadle ah halkaas oo aan ku raaxeysan karno koorsooyin kala duwan iyo shaqooyin ay barayaan xirfadlayaal ka socda warshadaha ugu muhiimsan. Markan waxaan ku siinaynaa a beca muddo bil ah platz waa Si aad u ogaato dhammaan koorsooyinka aad ku baran karto khadka tooska ah, si fudud uga soo gal halkan oo raac tallaabooyinka la tilmaamay, sidoo kale waxaan sidoo kale u ururin doonnaa bilo kuwa isticmaala ee ku biiraya, guul guul.
In kasta oo ay tahay wax iska cad qof walba, waxaan shaqsiyan kugula talinayaa in la is-baro oo wax laga barto farsamooyinka kala duwan ee internetku na siiyo, hase yeeshe, Platzi waa nidaam, habsami iyo rayn rayn lagu barto oo aan marar badan kaagala hadlay, si weyn bay iigu adeegtay cabbiro si loo ogaado teknoolojiyada cusub iyo in si habboon loo qaabeeyo fikradayda. Waxyaabaha ay tahay inaan iftiimiyo ee ku saabsan Platzi ayaa ah in laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa ay kugu dhiirrigelinayso inaad ka dhigto fikradahaaga ganacsi kuwo run ah, taas oo ah, waxay nagu dhiirrigelinaysaa inaan noqonno ganacsato iyo inaan helno horumar xirfadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Platzi: Madal rasmi ah oo lagu barto tiknoolajiyadda (Khibradeyda)
Waad ku mahadsantahay qoraalka PLATZY.
Boostada waxaad ku muujineysaa inay jiraan koorsooyin bilaash ah sida astaanta shaqsiga. Hagaag, ma jiraan wax bilaash ah ama ugu yaraan ma aanan arkin. Haddii aad u naxariisatay si aad u muujiso sida loo helo koorsooyinka bilaashka ah (waxaan rajeynayaa ma ogi inay tahay inaad bixiso wax ka hor intaadan helin midka bilaashka ah).
Well salaan iyo mahadsanid.
Jawaab LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
Waa kuwan tusaalooyin
Waxaan sameynayaa Sumadda Shakhsi ahaaneed waana Luis gebi ahaanba bilaash.
Jawaab ku samee Genesis Camacho
Waan ka tagayaa qoraalkan oo tartiib ayaan u socon doonaa
Ku jawaab jhoedram
Platzi waa kan ugu fiican adduunka waxbarashada Online-ka !!!! Waxaan bixin lahaa kun ka mid ah macaamiisha, maxaa yeelay waxa ku jira ayaa tayo leh oo barnaamijkeedu aad iyo aad u weyn yahay !!!!
Soo galitaan wanaagsan gacaliye, sii wad, ku arag xaga sare. 😉
Koorsooyinka Platzi ma matalaan kharashka qaddarka dhaqaale, tayada aad u hooseysa ee soo bandhigayaasha.
Xaaladdayda, waxaan aaminsanahay tan ka soo horjeedda, qiimaha koorsooyinka waxay iila muuqdaan kuwa ugu saxsan, iyada oo la tixgelinayo in dibloomooyinka ay ka qiimo badan yihiin 10 ama 20 jeer oo bil gudaheed ah waxaan arki karaa dhowr isla waqti isku mid ah oo ah sicirka fidsan.
Muxuu yahay ganacsade, imisa ayaa lagaa siiyay maqaalka? Waxay muujinaysaa saaxiib aad u badan.
Jawaab Anakin SW
Waa hagaag, waxba, waan ku baranayaa, sidoo kale haddii aad dalbato deeqda waxbarasho waxay i siinayaan hal bil oo deeq ah sida ku xusan maqaalka, laakiin marka laga reebo taas, Platzi waa madal aad iigu adeegaysa nolol maalmeedkayga iyo taas waxay noo ogolaatay inaan wax ka baranno waxyaabo badan oo ku saabsan teknolojiyadda.
Fikirka ma wadaagayo, ma dhahayo macalimiinta Platzi ma yaqaaniin, maxaa yeelay waxay u badan yihiin inay yaqaanaan waxbadan. Laakiin iyagu ma haystaan ​​aqoon ay wax ku baraan, sida caadiga ah waxay ku sharxaan qaab wax ku ool ah, waxay kuu sheegaan waxa lagu sameeyo waxaas oo kale iyo hadda, laakiin ma sii dheereyn karaan. Waa inaad qaab dhismeed badan sameysaa. Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa in haddii aad rabto, tusaale ahaan, inaad barato barnaamijka adiga oo aan wax fikrad ah qabin, ay ugu wanaagsan tahay inaad aqriso dukumintiyada, tixraacyada, iwm.
PS: boostada waxay umuuqataa xoogaa aniga la i iibiyay, waxaan rajeynayaa inaan qaldanahay.
Tayada koorsooyinka oo hooseeya, macallimiintu waxay u muuqdaan inay qaladaad sameeyaan marka la eego, qaarkood xitaa waxyaabaha aasaasiga ah, koorsooyinku waxay ku kooban yihiin barashada luqadda guud ahaan (taasna waan akhriyaa dokumentiyada oo si dhakhso leh ayaan u bartaa).
Aniga aragtidayda edx way kafiican tahay, shahaadada ayaa qaali ah oo guud ahaan waxay kuqoran yihiin Ingiriis, laakiin tayada koorsooyinka iyo macalimiintooda iyo mawduucyada kaladuwan ee lagahadlay ayaa aad ufarabadan.
Jawaab Felipe Rodríguez
wax ku biir aad u wanaagsan, mahadsanid… ¡¡¡¡¡
Jawaab Jose Bernardoni
Maqaal xiiso leh. Naxwaha naxdinta leh, laakiin xiiso leh xaalad kasta.
Dib u eeg tusaale ahaan sadarka soo socda, fadlan:
"Haddii aadan baran inaad ku baratid barnaamijka Koorsada Aasaasiga ah ee Platzi, shakhsiyan waxaan kuu xaqiijinayaa inay kugu adkaan doonto inaad barato barnaamijka, runti waa mid fudud oo cad, oo leh tusaalooyin adag oo xalal fudud leh
Ku jawaab Sete
Shaki yar baan iga qabaa, bisha ugu horreysa waa bilaash ka dib bisha ka dib lacag bixinta ugu horreysa horeyba waa loo soo oogay?
Ku jawaab Alberto Cardona
Waxaan qabaa inay tahay inaad bixiso bil si aad uhesho bil kale oo bilaash ah.
Waa inaad bixisaa bisha ugu horeysa, kadibna ta labaad waa bilaash
Oo haddaad bil kasta bixiso, miyaad beddeli kartaa habka lacag bixinta mustaqbalka?
Xaqiiqdii, iyo intaan ogahay, haddii aad bixiso bil isla markaana inta lagu jiro bishaas aad go'aansato inaad u gudubto sanadka, waxay aqoonsan doonaan lacagta aad ku bixisay bishaas
Haddii aad tahay bilow adduunka adduunka tiknoolajiyadda oo aad jeceshahay inaad horumariso, boggan waa mid aad u wanaagsan in lagu barto barnaamijka http://www.w3ii.com
Ku jawaab tris
Bogga laftiisu wuu fiicanyahay, waxaan u maleynayaa inay tahay hindise wanaagsan oo lagu barto fikradaha cusub. In kasta oo haysashada shahaado / shahaado iila muuqato xoogaa chorus ah, maadaama aad imtixaanka qaadan karto inta jeer ee aad rabto.
Ku jawaab davidcrx
Goobtu way fiicantahay, waxaad baraneysaa waxyaabaha aasaasiga ah laakiin markaa waad joogi doontaa halkaas. Waxaan bartay barnaamij ka sameynta Go in https://apuntes.de/golang hadana waxaan baranayaa React.
Ku jawaab Ellias
Sida loo cadaadiyo loona kala furfuro faylasha ku jira Linux
Sida loogu hagaajiyo daabacadaha Walaalka laser-ka kumbuyuutarka